Ukuqhekeka kweqhwa elimpunga njengophawu lokuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquka kwesimo sezulu kwaziwa njengokwanda kwamazinga okushisa emhlabeni wonke. Lokhu kubangela ukuthi izinguzunga zeqhwa nezigxobo zincibilike. Isibonelo esisobala sokuthi lokhu kuyenzeka ukwahlukana okwenzekile kufayela le- Iqhwa elimpunga, etholakala ku- ITorres del Paine National Park eChile.
Ukuncibilika kwezinguzunga zeqhwa kunemiphumela emibi emazingeni olwandle, ngakho-ke, emadolobheni angasogwini. Ukwephuka kweqhwa leGrey kungadala miphi imiphumela?
1 Ukuguquka kwesimo sezulu nokuncibilika kweqhwa
2 Ukuphuka Kweqhwa Elimhlophe
3 Yini engenziwa umkhandlu wedolobha ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu?
Ukuguquka kwesimo sezulu nokuncibilika kweqhwa
Ngaphambi kokuqala ngodaba lweGrey Glacier, umbono omncane ongaqondile mayelana nokuncibilika kwamakhokho eqhwa asezindaweni eziphakeme kanye nokwenyuka kwamazinga olwandle kudinga ukususwa. Kuyiqiniso ukuthi lokhu kubangela ukukhuphuka kolwandle, kepha akusebenzi ngale ndlela. Kumele kucatshangwe ukuthi intaba yeqhwa elintanta olwandle, njengaleyo eseNyakatho Pole, isivele inamanzi amaningi, amakhulu kakhulu kunaleyo ezoba nayo lapho ibuyela esimweni samanzi. Ukuncibilika kweNyakatho yeNyakatho ngeke kubangele ukuphakama kolwandle.
Ngakolunye uhlangothi, izinguzunga zeqhwa e-Antarctica zitholakala phezu kweshelufu lezwekazi, ngakho-ke lapho zincibilika, umthamo wamanzi ozoqukethwa ulwandle uzokhula.
Ukuphuka Kweqhwa Elimhlophe
Kuleli sonto kuqhamuke iqhwa elikhulu leqhwa elaphuka eqhweni iGrey. I-ice block inobukhulu obungu-350x380m futhi, iminyaka engu-12, ibilahlekelwa ivolumu elingana nama-cubic metres ayi-900.
Ukuguquka kwesimo sezulu kuyinkinga enkulu kunazo zonke emhlabeni ebhekene nesintu. Ama-78% amaChile Bakholelwa ukuthi ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu kumele kubekwe eqhulwini ngaphezu kokuthuthukiswa kwezomnotho wezwe.
“Ukuguquka kwesimo sezulu kuyenzeka manje futhi kwenzeka lapha. Yinto abaseChile abacace bha ngayo, ”kusho umengameli ngesikhathi evula iForamu YamaMeya mayelana Nesimo Sezulu, ehlelwe yiChilean Network of Municipalities on Climate Change kanye nenhlangano engenzi nzuzo i-Adapt Chile.
Yize abantu abaningi bengakubheki njengokubalulekile, kubalulekile ukuthi ohulumeni basekhaya bathathe izinyathelo zokunciphisa ukuguquka kwesimo sezulu ukuze, kusuka endaweni, kuye emhlabeni jikelele. Kuyizenzo ezincane esilinganisweni esincane esisebenza ekugcineni emhlabeni wonke.
Yini engenziwa umkhandlu wedolobha ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu?
Umbusi waseChile, Michelle Bachelet, uvule umcimbi lapho kuhloswe khona ukwazisa ngezenzo omasipala abangazenza ukunqanda ukuguquka kwesimo sezulu ngezinga lendawo. Izinqubomgomo eziphakanyiswa ngesikhathi somcimbi zingabekwa, zenzelwe futhi zisetshenziswe komasipala baseChile.
Lo mcimbi uzobhekana nezinkinga ezibalulekile ezithinta iplanethi yonke, njengokuqapha i- Isivumelwano SaseParis, Izenzo zokuzivumelanisa nokuguquka kwesimo sezulu kanye nokuhambisana nezinhloso ze-Climate Action Agenda.
Amaqhekeza afana nalelo elikuGrey Glacier azoba yingxenye yesimo sokufudumala kwembulunga esingenakugwemeka futhi esingalungiseki. Njengoba kushiwo ngaphambili, okuyikhona okuzothinteka kakhulu yile nto yokwenyuka kwamazinga olwandle kuzoba ngamadolobha asogwini ngenxa yengozi eyanda yezikhukhula.
Umphumela omubi kakhulu osheshe waba khona lapho kuqhekeka leli glacier ubunzima obubangela ekuzulazuleni.
Kuzo zonke izinguzunga zeqhwa zomhlaba ibhalansi engemihle ingatholakala. Lokho kusho ukuthi, Iqhwa eliningi lilahleka ngokuncibilika kunalokho okutholakala ngokunqwabelana kweqhwa. Lo mkhuba awuthinti kuphela iqhwa leGrey, kepha kukhona izinguzunga zeqhwa ezilahlekelwe amakhilomitha ayishumi nantathu esikhathini esingaphansi kweminyaka engamashumi amathathu.
Lo mkhuba uzoqhubeka njalo ngonyaka uma ukufudumala kwembulunga kunganqandwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuqhekeka kweqhwa elimpunga njengophawu lokushintsha kwesimo sezulu